के गुण्डाराजको अन्त्य होला ? | Ekhabar Nepal
मंसिर २६ २०७६
के गुण्डाराजको अन्त्य होला ?
राजनीति बैशाख ११ २०७५ ekhabarnepal
राजनीति सुधारको दिशामा
डी.आर. घिमिरे । रुपन्देही जिल्लाको इतिहासलाई नै बदनाम गर्ने एउटा कुपात्र मनोज पुन, जो इन्काउण्टरमा मारिएपछि पनि चर्चाको उत्कर्षमा छ । पञ्चायतकालमा बहुदलको समर्थन गर्ने र बहुदलको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्नेहरुलाई दीपक बोहोराले आतंक मच्चाएर रुपन्देही जिल्ला चर्चाको उत्कर्षमा हुन्थ्यो भने अहिले गणतन्त्रको युगमा एउटा गुण्डाका कारण एक घर मुल्याले सय घर पिर्छ भनेजस्तै भएको छ । मनोजको मृत्युपछि पनि उसले धेरैलाई रुवाएको छ । कैयनको राजनीतिक जीवन समाप्त पारेको छ । कैयनको घरबार चौपट पार्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यहाँसम्मकि उसलाई समर्थन गर्ने, सहयोग गर्ने र उठबस गर्नेहरुका समेत पाप धुरीबाट कुर्लिरहेको छ ।
पछिल्लोपटक राजनीतिक आवरणका ब्यक्तिहरु धमाधम पक्राउ पर्नुले एकातिर प्रहरी संगठनको शाख बढेको छ भने अर्कोतिर राजनीतिक पार्टी तथा राजनीतिकर्मीहरुमा अपराधीहरुलाई संरक्षण गर्ने दिन गएछन् भन्ने सन्देश गएको छ । गत हप्ता केही सार्वजनिक ब्यक्तिहरु प्रहरीको कठघरामा परेका छन् । मनोजका सहयोगीको रुपमा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपाने र युवा संघका जिल्ला नेता उत्तम आचार्य, देवदह–५ का तुलसी न्यौपाने, देवदह–६ का रोशन खड्का र बुटवल–४ बस्ने उद्योगपति हरिप्रसाद श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको दुई दिनपछि युवा संघ रुपन्देहीका इञ्चार्ज सुजु मल्ललाई प्रहरीले सार्वजनिक गर्यो । यद्यपि यी ब्यक्तिहरु अहिलेसम्म अभियुक्तमात्र हुन् ।
गत हप्ता नै मनाङ प्रदेशसभा ‘ख’ बाट निर्वाचित सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) पनि जेल चलान भएका छन् । १३ वर्षअघि आफ्नै साथी अर्का गुन्डा नाइके चक्रे मिलन (मिलन गुरुङ) लाई हतियार प्रहार गरी ज्यान मार्ने प्रयासमा दोषी ठहर भई फरार गुरुङ काठमाडांैबाटै पक्राउ परे । निर्वाचनको समयमा मनोनयन दर्ता गर्दा मनाङे ५ वर्ष कैद सजाय हुने गरी फौजदारी अपराधमा दोषी ठहर भएको उजुरी परेको भए निर्वाचन आयोगले मनाङेको उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्थ्यो । तर, कसैले त्यस प्रकारको हिम्मत गर्न सकेन ।
राजनीतिकर्मीहरु पक्राउ पर्ने क्रम यतिमात्र हैन, दुप्चेश्वर गाउँपालिका–१ नुवाकोटका वडाध्यक्ष सुनबहादुर तामाङ पनि सर्वाेच्च अदालतको आदेशमा छुटेर पनि तत्काल पक्राउ परे । २०५३ सालमा दुई किशोरीलाई झापा हुँदै भारत बेच्न लैजान लागेको मुद्दामा ६ वर्ष कैद सजाय भएका उनलाई मानव बेचबिखन मुद्दामा ३७ वर्ष कैद र २ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाइएको थियो । उनले नुवाकोटबाट मात्र २ सयभन्दा धेरै चेलीलाई कोठीमा पुर्याएको अनुमान छ ।
उता टीकापुर हत्याकाण्डका योजनाकार रेशम चौधरी ‘फरार अभियुक्त’को सूचीमा रहेकै बेला कैलाली– १ बाट निर्वाचन जिते । उनीलाई केहीले सपथ गराएर संसदमा जान दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
यसरी एकपछि अर्को गर्दै राजनीतिकर्मीदेखि जनप्रतिनिधिसम्म आपराधिक कर्ममा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका छन् । यो कुनै चानेचुने कुरा हैन । राजनीतिमा अपराधीहरु किन संलग्न हुन्छन् त ? यसको सुक्ष्म विष्लेषण हुन जरुरी छ । शक्ति, पद, पैसा र शान प्राप्त गर्ने चीज राजनीति भएको छ अहिले । राजनीतिमा लाग्नका लागि राजनीतिक सस्कारको आवश्यकता पर्दैन यतिवेला । राजनीतिको परिभाषा जान्नुपर्दैन । देशको भूगोल, सस्कृति, सभ्यता, इतिहास, थोरवहुत अर्थ राजनीति, विश्व राजनीति वा घटनाक्रमकोवारेमा पनि जान्नुपर्दैन । जनतालाई दुःख सुखमा साथ दिनु पनि पर्दैन । चुनावमा खर्च गर्ने सामथ्र्य भए पुग्छ र केही युवाहरुलाई लेफ्ट राइट वनाएर नेताका अंघि पछि धुपवत्ती वाले पनि हुन्छ । वेरोजगारले ग्रस्त युवाहरु वियर र हिृस्कीको साथमा एक छाक मिठो मसिनो खुवाएर फलानो दाजुलाई टिकट चाहियो भनेर नेताको घर दैलोमा धर्ना कस्न लगाउनु योग्यताको अर्को मापदण्ड हो ।
तर, अहिले जे प्रक्रिया शुरु भएको छ यसवाट सुधारका संकेत देखिएका छन् । रुपन्देहीका प्रहरी उपरिक्षक श्याम ज्ञवालीले हिम्मत गरेको यो अभियानलाई सरकारले, राजनीतिक नेतृत्वले र नागरिक समाजले सम्मान गर्नै पर्दछ । यो प्रकरण केवल रुपन्देहीको मात्र हैन भन्ने कुरा मनोजको डायरीले नै प्रष्ट पारेको छ । धनगढीदेखि धरानसम्मका चार सयको फिरौती माग्नेको सूचीले र भारतीय कुख्यात अपराधी बिट्टु भनिने योगेन्द्र सिंहसंगको कनेक्शनले यो आपराधिक जालो अन्तर्रराष्ट्रियकरण हुंदै थियो भन्ने संकेत गर्दछ । समयमै यो जालो एसपी ज्ञवालीको प्रयासले तोडिएको छ । सम्भवतः यसो हुन नसकेको भए केही वर्षभित्रै यसले भयानक रुप लिने थियो । फिरौतीका नाममा धेरै उद्योगी÷व्यवसायीले ज्यान गुमाउनु पर्ने थियो ।
नेतृत्व सुध्रिए समाधान हुन्छ
मुख्य कुरा राजनीतिक नेतृत्व सुध्रिनु पर्ने रहेछ । सवै कुराको निर्णायक राजनीतिनै हो । यसप्रति हाम्रो समाज अलि दुराग्रही छ । राजनीति केही हैन भन्ने चिन्तन र केवल गाली पुराणले समाधान हुंदैन । विगतलाइ फर्केर हेर्नु पर्दछ तर विगतले मात्र सुधार हुन्न । सोंच, चिन्तन र ब्यवहारमा परिवर्तनको आवश्यकता हो भने सवैभन्दा पहिले आफैवाट परिवर्तनको सुरुवात गरौं । विगतमा सवैले थोरवहुत गल्ती गरेका छौं । त्यसैले अव नयाँ शिरावाट प्रारम्भ गरौं । त्यसका लागि राजनीतिनै हो मूल कुरा भन्ने पनि वुझौं । गुण्डाराजलाई राजनीतिक संरक्षण नहुने हो भने त्यसको अन्त्य पनि सजिलैसँग हुने गर्छ । हरेक नेताले गुण्डा पालेका छन् । गुण्डालाई कार्यकर्ताको पगरी गुथाइएको छ र जस्तोसुकै अपराध गरे पनि राजनीतिक संरक्षण प्रदान गरिएको यथार्थ हो । चुनाव जित्नका लागि पनि गुण्डा पाल्नैपर्ने बिहारी शैलीले लोकतन्त्रसँगसँगै गुण्डाराज मौलाएको हो ।
त्यसो भए अव के गर्नेत ?
१. राजनीतिमा लाग्नेहरु अपराधका सहयोगी हुनु भएन । लेखनाथ न्यौपानेले मनोजसंग कुरा गर्दा तत्कालीन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा लगायतसंग नियमित सम्पर्कमा रहेको र त्यस कुराको प्रमाण मोवाइलवाट पटक पटक कुरा गरेको भेटिएपछि प्रहरीले पक्राउ गर्न नसकेको वा हिम्मत नगरेकोमा गौरव गरेको पाइन्छ । यसवाट फोनमा कुरा गर्नुपनि दुरुपयोग गर्नुृ रहेछ । शायद त्यस्ता ब्यक्तिहरुलेनै धेरै फोन गरेर समय ब्यतित गराउंदछन् । जसले वढी स्वार्थ लिन खोज्दछन् उसलेनै नियमित सम्पर्क गर्दछ शायद । त्यसैले अव आयन्दा नेताहरु सजग हुन जरुरी छ ।
२.राजीव गुरुङ , दिनेश अधिकारी ‘चरी’,गणेश लामा,सञ्जय शाह ‘टक्ला’,बाबु थापा, ल्हारक्याल लामाजस्ता ब्यक्तिहरु राजनीतिलाई माध्यम वनाएर सांसद वा मन्त्रीसम्म भएका ब्यक्तिहरु हुन् । अव नेतृत्वले वुझ्नु पर्छ आपराधिक ब्यक्तिलेनै चाकडीलाई उच्च महत्व दिएको हुन्छ र राजनीतिलाई प्रयोग गर्न खोज्दछ । त्यसैले राजनीतिको नेतृत्वमा राजनीतिक ब्यक्तिलाईनै स्थान दिनुपर्छ । जसको जे कर्म हो उसलाई त्यही जिम्मा दिइयो भने मात्र उसले राम्रोगरि सम्पादन गर्न सक्दछ । अपराधलाई सस्थागत गर्ने ब्यक्तिलाई संरक्षकत्व कसैले पनि दिनु भएन । यति हुंदासाथ राजनीति सुध्रिन्छ । राजनीति सुध्रिदासाथ चुनावमा अनावश्यक खर्च पर्च गर्नुपर्दैन र नेतृत्वप्रति आस्था र विश्वास पनि पैदा हुन्छ ।
३. निश्चयनै अब राजनीति सुधारको दिशामा जांदै छ भन्ने सन्देश दिएको छ पछिल्ला घटनाक्रमहरुले । एमाले माओवादी नेतृत्वको सरकार रहेको बेला त्यही पार्टीका क्याडरहरु अपराधिक घटनामा संलग्न भएवापत पक्राउ पर्नु र कुनै पनि नेताहरुले प्रहरीको छानविनलाई प्रभावित पार्न नखोज्नुले यो सरकार नीतिगत रुपमै भ्रष्ट र डनहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन खोज्दैछ भन्ने सन्देश दिएको छ । अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी उपरीक्षक श्याम ज्ञवालीको शब्दमा यस प्रकरणमा कसैको दवाव र प्रभाव छैन । बरु केन्द्रीय निर्देशनमै यो सवै भइरहेको छ । कुनै पनि पार्टीको नेतृत्वले हस्तक्षेप नगर्ने हो भने प्रहरीले जस्तोसुकै अपराधीलाई पनि पक्राउ गर्न सक्छ भन्ने कुराको यो एउटा उदाहरण हो । त्यसैले अहिले जे भइरहेको छ यसवाट सरकारप्रतिको भरोसा पनि वढ्दै गएको छ ।
४. सही नेतृत्व भयो भने मुलुक सुध्रिन वेर लाग्दैन । अव नेताहरुलाई गाली गर्दा हरेक नागरिकले वुझ्नु पर्दछ नेताहरुलाई त्यो अवस्थामा पुर्याएको कसले हो ? त्यसैले सवैले कशम खाएर संकल्प गरौं कि अव आयन्दा नेतृत्वलाई दुरुपयोग गरिने छैन । सदाचार र इमान्दार नेताको खोजी गर्नका लागि चुनावमा धेरै खर्च गर्ने हैन कम खर्च गर्ने नेतालाई साथ दिऔं । यसो गर्दासाथ प्रकारान्तरले सवैको हित हुन्छ । मुलुक वनाउन र मुलुकलाई सही दिशामा डोर्याउनका लागि एउटा पुस्ताले त्याग गर्नै पर्छ । यो सही समय हो । यसको अधिकतम सदुपयोग गरौं ।
५. रुपन्देहीवाट संकलन भएको ५ करोड रुपैयां हराएको कुरा प्रहरीले वताएको छ । त्यसका लागि सम्पत्ति छानविन गर्ने कुरा वाहिर आएको छ । यो आफैमा राम्रो कुरा हो । कतिपय कानुनी ब्यवस्थालाई पनि ब्यवहारमा नउतारेकाले समस्या आएको हो भने अव त्यसको कार्यान्वयनतर्फ लाग्नै पर्दछ । वास्तवमा यो सरकारले सिण्डीकेटको अन्त्य गरेर एउटा वहादुरी काम गरेकै छ । यो सामान्य जस्तो लागेपनि असामान्य विषय हो । सुनिदैछ अन्य धेरै सिण्डीकेटहरु तोड्ने गृहकार्य भइरहेको छ । यसवाट के वुझिन्छ भने सरकार आक्रामक रुपले सुधारको दिशामा जादैछ । त्यसैलेत प्रतिपक्षहरुपनि पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् ।
चुनौती अझै छन्
प्रारम्भिक रुपमा रुपन्देहीका सवै ब्यापारी, उद्योगी र सवै सवै नागरिक असाध्यै खुशी छन् । उनीहरुमा यो सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्दछ भन्ने आशा जागेको छ । यति हुदा हुंदै पनि चुनौतीहरु छन् । यतिलेमात्र गुण्डाराजको अन्त्य हुंदैन । गुण्डाका नाइकेहरु सामान्य जविनमा फिर्ता हुंदैनन् । राजनीतिमा रहेको अपराधीकरण सकिदैन । चन्दा, फिरौति र असूली पूर्णरुपले रोकिदैन । तर, यो कुरा सत्य हो कि उनीहरुको मनोवल घटेको छ । फेरि टाउको उठाउन पाइदैन कि भन्नेमा चिन्तित् छन् । सम्भवतः अझै केही ब्यक्ति पक्राउ पर्न वांकीनै छन् । जो पक्राउ परिसकेका छन् तिनीहरुसंग सोधपुछ र वयान लिने काम भएको छैन । शायद उनीहरुले कसै कसैको पोल खोल्ने अवस्था पनि होला । आफ्नो भविष्य सकिएपछि उनीहरु अर्काको भविष्यप्रति सम्वेदनशील हुने छैनन् । त्यस अर्थमा केही छोंटे राजाहरुले उन्मुक्ति पाउने अवस्था छैन । बांकी चुनौतिलाई प्रहरीले सामना गर्न सक्यो भने नेपालमा चरी, टक्ला वा घैंटेहरु फेरि जन्मने छैनन् । सिण्डीकेट र गुण्डाराजको अन्त्य भयो भने यो सरकारको लागि सवैभन्दा ठूलो सफलता मानिने छ । सरकारले सकारात्मक सन्देश दिन सकेको छ । तदनुसारका संकेत पनि छन् । तर, सजिलो छैन । फेरि पनि प्रश्न उठ्दछ आखिर सरकारले नगरे कसले गर्ने ? अहिले नगरे कहिले गर्ने ?